Kabary – Fimpima maneran-tany: « Hampiana ireo sampana matoritory » | NewsMada
Kabary – Fimpima maneran-tany: « Hampiana ireo sampana matoritory »
Ny faran’ny herinandro teo, nandritra ny Zaikabe tany Antsiranana, voafidy ho filohan’ny Fimpima maneran-tany indray i Hanitra Andriamboavonjy. Nilaza ireo heveriny ho laharam-pahamehana ho an’ny efa-taona manaraka izy.
« Miara-manomboka no zava-dehibe mba tsy hisy ny ho tratra aoriana », hoy i Hanitra Andriamboavonjy, filohan’ny Fikambanan’ny Mpikabary malagasy maneran-tany (Fimpima maneran-tany). Avy amin’izany no namaritany fa « ny voa nafafy, tsy indray maniry. Misy sampana somary matoritory. Omena fanampiana izy ireny mba hiara-miainga ny rehetra. Io no laharam-pahamehana, manomboka izao », hoy izy. Hisy ny fifidianana isan’ambaratonga toy ny filohan’ny faritany Fimpima maneran-tany sy ny filohan-tsampana, « omena fiofanana izay voafidy hiantsoroka adidy amin’ireny ka mila izany. Raha handray andraikitra, ndeha hampahafantarina ny andraikiny », hoy hatrany izy. Nohazavainy tamin’izany fa raha tafapetraka tsara izay fiaingana mitovy izay, ho mora ny hahafahana miasa ifotony amin’ireo tetikasa rehetra hotanterahin’ny Fimpima maneran-tany.
Marihina fa ao anatin’ny fankalazana ny faha-55 taona niorenany ity fikambanana zokiny indrindra mikirakira sy mikolokolo ary mampivelatra ny tontolon’ny kabary ity ankehitriny. Ny 16 novambra izao ny ivon’izany fankalazana izany izay homarihina eto Antananarivo. Hisy ny fikaonan-doha momba ny kabary amin’izany. « Mpikabary mifaribolana, mikarajia an-kihitse », ny lohahevitra amin’io.